Soo dejisan RJ TextEd 14.70 – Vessoft
WindowsHorumarinTafatiraha qoraalkaRJ TextEd
Bogga rasmiga ah: RJ TextEd
RJ TextEd – tifaftire qoraal ah oo badan oo ka shaqeeya koodhka koodhka oo la yimaada taageerada Unicode. Farsamooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijkan waxaa ka mid ah qaabaynta CSS iyo HTML oo leh karti u leh horgal, jeeg, jaangooyo, habka ASCII iyo macluumaadka ikhtiyaariga ah, macmiilka FPT oo la dhisay si loo soo rogo faylasha, iwm. RJ TextEd wuxuu ka kooban yahay tafaftiraha syntax oo taageeraya badi luqadaha casriga ah ee barnaamijyada casriga ah iyo calaamadaynta. Software wuxuu leeyahay shaqeyn ah autocomplete ah, halkaas oo geedi socodka ah oo ku saabsan edebinta code-ka codka pop-up muuqan. RJ TextEd wuxuu kuu ogolaanayaa inaad meel fog ka badasho koodhka ilaha iyo fiiri natiijooyinka ka socda browserka ee daaqada barnaamijka. RJ TextEd waa xal fiican oo loogu talagalay naqshadeenta websaydhka iyo barnaamijyadaba iyada oo la kaashanayo qalab waxtar leh iyo howlgal ballaaran.
Waxay taageertaa hababka kala duwan ee qoraalka qoraalka
Hawlgalka ASCII iyo macluumaadka ikhtiyaariga ah
Horudhac CSS iyo HTML
Waxay taageertaa luqado badan oo casri ah
Soo dejisan RJ TextEd
Faallo ku saabsan RJ TextEd
RJ TextEd Xirfadaha la xiriira
software ah in cadaadin, diinta iyo ka soo fagid buugagga taariikhda oo kala duwan, iyo tirada. software waxay leedahay dhowr ah qalab loogu talagalay howlgalka wax ku ool ah ee kaydka.